အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ထုတ်ကုန်သေချာသောတင်းကျပ်နှင့်ပြည့်စုံသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြ အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ဖောက်သည်၏အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုနိုင်ပါတယ်။ အပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတင်းကျပ်စွာတင်ပို့မီကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ပါပြီ။
ပုံစံ - FORGED STEEL No. S80、S80F
DSC သံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC Steam ထောင်ချောက်
●MOP 32K x ကို 320̊ဂ..
●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု,ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,စနစ် PURGE မှကောင်းသောစွမ်းရည်.
●ပြည်တွင်းစစ်ဆေး Valve optional ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/thermostatic-steam-trap-1.html
အကောင်းဆုံး အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူထိန်းကိရိယာရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC အားလုံးသံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်အားလုံးမဟုတ်ဘူး.S72、S72F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်. ●Excellent ကချေးခံနိုင်ရည်. ●ဟိုက်ဒရောလ်ရှော့ခ်များကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ပြန်ဖိအားဆန့်ကျင်ကောငျးမှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●အသေးစားနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.S72